Apho besingenakoyiswa khona: phakathi kwenoveli yolwaphulo-mthetho kunye nezinto ezihamba phambili | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | 01/08/2021 18:56 | Ababhali, Iincwadi, Inoveli emnyama
Apho sasingenakoyiswa yinoveli yolwaphulo-mthetho ngumbhali waseSpain uMaría Oruña. Ushicilelo lwayo lokuqala lwapapashwa ngo-Epreli 2018 kwaye lunyanzeliso lwesithathu kuthotho lweCantabrian Iincwadi zasePuerto Escondido. Njengezahluko ezidlulileyo, ibali libandakanya useto olufanayo kunye nabalinganiswa abaphambili-iiarhente zikaValentina kunye no-Oliver-, nangona ibonakalisa iyelenqe lomntu ngamnye.
Olunye umahluko ophambili wale ncwadi ngokubhekisele kubanduleli bayo kukubandakanywa komxholo oqhelekileyo. Yayo, U-Oruña wenza inkqubo ebanzi yophando, kunye nodliwanondlebe neengcali kunye namaxwebhu abanzi. Ibali, ke, lingena kwihlabathi eliyimfihlakalo, elingenayo inzululwazi engenayo inkcazo echanekileyo. Olu tshintsho lweparadigm lugcina umfundi ecamngca phakathi kwento yokwenene kunye nento engekhoyo.
1 Isishwankathelo sendawo esingoyiswayo kuyo
1.1 Uphando olutsha
1.4 Iziganeko eziqhelekileyo
2 Uhlalutyo lokuba sasingenakoyiswa phi
2.3.3 UAlvaro Machin
2.4.1 Indlela yoncwadi
2.4.2 Isimo somculo
2.4.3 Igama lomntu ophambili
3 Malunga nombhali, uMaría Oruña
Isishwankathelo se Apho sasingenakoyiswa
valentina Uvalelisa kwisithandwa sakhe uOliver, ungena emotweni kwaye ulungiselela ukushiya ikhabhathi yakhe esiya eSantander. Pha, uLieutenant Indawo yophando ye-UOPJ ijongiswe ngqo. Ngokukhawuleza, ufumana umnxeba ovela kuCaptain Marcos Caruso, omazisa ukuba kufuneka aye eSuances, ngakumbi kwiBhotwe laseQuinta del Amo, kuba igadi-U-Leo Diaz- ubonakale efile kwiindawo eziluhlaza zale ndawo.
Endlini kukho Umphathi wenkundla uClara Múgica, othe emva kokuhlola isidumbu sikaLeo omdala— uthatha ukuba ubulewe sisifo sentliziyo. UValentina ufika kwindawo yesehlo kwaye kwangoko waziswa yingcali malunga neenkcukacha zokusweleka. Oku kuyakwenza uqinisekisa ukuba wasweleka malunga nentsimbi yeshumi elinanye ebusuku, Kwaye, ukongeza, umntu uvale amehlo abo. Ezi nkcukacha zokugqibela zishiya iarhente inomdla.
ULieutenant uqala ukugcina yonke into malunga umfi, nto leyo evumela ukuba babone indlela banzi kwaye intembeko lendlu. Kumgama abonisa umfana othile, umalunga noko UCarlos Green, lowo kufuneka umncine, ukususela nguye owafumana umzimba. Indoda ingumbhali kwaye ingumnini wepropathi, ulapho ukuze achithe ihlobo, agqibe umbhalo-ngqangi wencwadi yakhe entsha kwaye athengise indlu.
Uhlaza kubonakala kuValentina namaqabane akhe — uRiveiro noSabadelle— ukuba kwenzeka into engaqhelekanga kwesihlanu. Oko wafikayo, uqaphele imisindo engaqhelekanga, ubukho obungachazekiyo kwaye uvukile enemivimbo emzimbeni wakhe ngaphandle kwesizathu. Ngaphandle kokuthandabuza, i-lieutenant kufuneka ibuze malunga nezi ziganeko ziqhelekileyo kwaye zinxibelelana njani nokusweleka kwegadi.
Yile ndlela ibali eliqhubeka ngayo elidibanisa ukuhamba kukaGreen ukuya kwixesha elidlulileyo-obukhumbula ubutsha bakhe kunye nehlobo laseSuances-, kunye neemfihlakalo ezifakwe kwiQuinta del Amo. Konke ngelixa uphando malunga nokufa kukaDiaz kunye neziganeko zomoya zenziwa. Abokugqibela bayakuthetha-thethana noProfesa Machín, onika ikhosi malunga nezinto ezikhoyo kunye neziganeko.
Uhlalutyo Apho sasingenakoyiswa
Apho sasingenakoyiswa Ibekwe kummandla wonxweme weSuances, eSpain. Incwadi inayo Amaphepha angama-414 asasazwa phakathi kwizahluko ezili-15, apho iziza ezintathu ziphuhlisiwe zibalwa phantsi kweefom ezimbini zokubalisa. Nantsi lapho owaziyo umntu wesithathu obalisa Echaza amava abalinganiswa, nomnye umntu wokuqala oxelela uyilo lwenoveli nguCarlos Green.
Njengokuhanjiswa kwangaphambili, U-Oruña uphinde aliphinde eli bali eCantabria, ngokukodwa Kwibhotwe eliphambili le-Master. Umbhali uchaza le ndawo ngendlela ekhethekileyo, kunye nezinye iindawo eSuances. Umsebenzi ogqibeleleyo wophando lweSpanish, othi ngeenkcazo ezicocekileyo akwazi ukudlulisela umfundi kwezi ndawo zibalaseleyo.
Ungumbhali oselula waseMelika. Uhlala eCalifornia kwaye Ukuya eSuances ukubhala inoveli yakhe entsha. Umakhulu wakhe uMartha — owasweleka kunyaka ophelileyo- wamshiya njengendlalifa yedwa ebhotwe ebizwa ngokuba yi "Quinta del Amo". UCarlos uyikhumbula le ndawo ngolangazelelo olukhulu, kuba wachitha ixesha lakhe leeholide apho kwaye wayenamava okuqala ngokusingisela.
Ngumlinganiswa ophambili kolu ngcelele, i-lieutenant evela kwi-Spanish Civil Guard ekhokela i-Organic Unit yamaPolisa eziGwebayo (UOPJ). Kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo wafudukela eVilla Marina, eSuances, ekunye nesoka lakhe uOliver. Ukusukela ngoko ubomi bakhe bezolile kwaye buzinzile.
Unguprofesa onamava wengqondo yokusebenza kwengqondo, useedolophini ukunika iintetho kwizinto ezinokubakho. Ezi ntetho zibanjelwa kumabala emidlalo ePalacio de La Magdalena, apho abelana khona ngokukodwa nomfundi oyingcali ngalo mbandela.
Ngenxa yempumelelo ye Serie Iincwadi zasePuerto Escondido - Kuba oku kugcine iiSuances njengelona nqanaba-, IBhunga lesiXeko lenze iPuerto Escondido Literary Route kwi2016. Apho, iindwendwe zinokuhamba kuzo zonke izithuba ezihanjisiweyo kwinoveli.
Umbhali waseSpain uchaza amabali akhe ngokubandakanywa kweengoma kuphuhliso lwebali. Kule fomathi wafaka imixholo emithandathu yomculo, uluhlu olunokonwabela eqongeni Spotify, enegama: Umculo-Apho besingoyiki- Spotify.
Igama lomntu ophambili
U-Oruña uxele kudliwanondlebe noMontse García we-portal ILa Voz de Galicia, que Igama le-protagonist yolu ngcelele, uValentina Redondo, sisenzo esibonisa umbhali uDolores Redondo. Kule meko, wathi: "Ibiyinto yobuqu, kuba kum, njengombhali, ibonisa ukuba" ndingayeki ukuphupha ", kuba undikhuthazile ukuba ndiqhubeke ndisebenze xa ndingakhange ndikucinge nokushicilela."
Umbhali waseGalician UMaria Oruña Reinoso Wazalelwa eVigo (eSpain) ngo-1976. Wafundela ezomthetho eyunivesithi, umsebenzi awawenza iminyaka elishumi kwezomsebenzi nakwezorhwebo. Emva kwelo xesha uzinikele ngokupheleleyo kuncwadi. Ngo-2013, wapapasha Isandla somtoli, umsebenzi wakhe wokuqala, inoveli enomxholo wabasebenzi, ngokusekwe kumava akhe obuchwephesha njengegqwetha.
Kwiminyaka emibini kamva wazisa ngomsebenzi wakhe wesibini wokubhala, elityala kuhlobo lwenoveli yolwaphulo-mthetho: Izibuko elifihliweyo (2015). Naye waqala uthotho lwakhe olwalusaziwa Iincwadi zasePuerto Escondido, eneCantabria njengenqanaba layo eliphambili. Le ndawo ibaluleke kakhulu kumbhali, kuba wayeyazi ngokugqibeleleyo ukusukela ebuntwaneni; Akalilize xa echaza ngokweenkcukacha kwiimbali zakhe.
Enkosi kwimpumelelo yale mali yokuqala, kwiminyaka embalwa kamva wathumela: Indawo oza kuya kuyo (2017), kananjalo nokwamkelwa okukhulu ngabafundi. Ukuza kuthi ga ngoku uthotho luneenoveli ezimbini ezongezelelweyo: Apho sasingenakoyiswa (2018) kunye Yintoni efihliweyo ngumsinga (2021). Embindini wale mabali mabini, iSpanish yazisa: Ihlathi lemimoya yomine (2020).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » Apho sasingenakoyiswa